Tapitra ny fe-potoana faha-roa Ted Lasso alohan'ny fotoam-pampiofanany amin'ny volana manaraka | Avy amin'ny mac aho
Iray amin'ireo andiany mahomby indrindra amin'ny serivisy horonantsary streaming an'i Apple dia i Ted Lasso, andiany iray izay, hatreto amin'ity taona ity, dia nahazo loka marobe, anisan'izany i Golden Globes ary ny guild an'ny Mpanoratra Guild y Syndicate an'ny mpisehatra.
Ny fizarana faharoa amin'ity andiany ity dia hanomboka amin'ny volana Jolay. Iray volana latsaka kely sisa alohan'ny première dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy fa i Brendan Hunt, mpiara-miasa mpamorona andian-dahatsoratra nifarana ny fakana sary ho an'ny vanim-potoana faharoa.
Apple dia namoaka ny volana aprily lasa teo, ny tranofiara voalohany amin'ity vanim-potoana faharoa ity, tranofiara iray izay tsy nahalala firy antsika, zavatra toa azy ireo ihany. Apple dia nanamafy volana vitsivitsy lasa izay fa ity andiany ity dia nohavaozina ho an'ny vanim-potoana fahatelo, vanim-potoana fahatelo de io no ho farany araka ny nohamafisin'i Jason Sudeikis sy ilay mpiara-mamorona andian-dahatsoratra volana vitsivitsy lasa izay.
Andro vitsy lasa izay, nanamafy ny iray tamin'ireo mpamorona ny andiany fa miasa izy ireo handefa ny azy ireo fanitsiana ny andiany, ary anisan'izany ny akanjon'ny ekipa mpilalao baolina kitra.
Apple TV + Famotsorana ho avy
Hatramin'ny zoma lasa teo, ny fizarana telo voalohany an'ny Tantaran'i Lisey, miniseriana miorina amin'ny boky ankafizin'ny mpanoratra nosoratan'i Stephen King, izay izy koa no niandraikitra ny fampifanarahana ny script amin'ny endrika serial. Ao aorinan'ny famokarana i JJ Abrams ary ao amin'ny mpilalao Julianne Moore sy Clive Owen.
Premiere mahaliana iray hafa miandry antsika amin'ity volana Jona ity dia Ara-batana, andiany napetraka tamin'ny taona 80, izay misy vehivavy mpikarakara tokantrano miditra amin'ny tontolon'ny aerobika ho toy ny làlan-tokana mankany amin'ny fanambadiana efa simba.
Ho an'ireo ankizy kely dia mikasa ny hamoaka atiny vaovao toa ny vanim-potoana faharoa an'ny Apple ihany koa i Apple Trano alohan'ny maizina ary ny mozika mihetsika Central Perk.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mifarana amin'ny fizarana faharoa Ted Lasso alohan'ny fampiofanana azy amin'ny volana ambony ny fakana sary